Manchester United Oo Shaqada Ka Caydhinaysa Ole Gunnar Solskjaer Kaddib Saxeexyadii Shalay Ee Cavani, Telles & Diallo Iyo Mauricio Pochettino Oo Wada-Hadal U Socdo - Gool24.Net
Manchester United Oo Shaqada Ka Caydhinaysa Ole Gunnar Solskjaer Kaddib Saxeexyadii Shalay Ee Cavani, Telles & Diallo Iyo Mauricio Pochettino Oo Wada-Hadal U Socdo
Manchester United ayaa xidhiidh la samaysay Mauricio Pochettino si uu u noqdo tababaraha cusub ee United oo uu shaqada uga beddelo Ole Gunnar Solskjaer, kaas oo la sheegayo in shaqada laga caydhin doono xilli ay kooxdu samaysay saxeexyo muhiim ah.
Red Devils oo kulankii ugu dambeeyey horyaalka ay Tottenham ku garaacday 6-1 ayaa waxay maalintii ugu dambaysay suuqa iibka ciyaartoyda shaacisay saddex saxeex oo ah Edinson Cavani, Alex Telles iyo Amada Diallo (bisha January ayuu laacibkani imanayaa).
Sidoo kale, waxay guul-darradaas kaga fal-celisay inay la xidhiidho tababaraha reer Argentina ee Pochettino oo aan wax shaqo ah qabanin tan iyo markii laga caydhiyey Spurs 11 bilood ka hor.
Masuuliyiin ka tirsan Manchester United ayaa u xaqiijiyey wargeyska Daily Star ee kasoo baxa UK, in kooxdu ay la xidhiidhay Mauricio Pochettino wakiilladiisa oo ay la bilaabayaan wada-hadal si uu u noqdo macallinkooda cusub.
Warku waxa uu intaa ku daray in xubnaha sare ee maamulka kooxdu ay doonayaan in waqti kale la siiyo Solskjaer kaddib saxeexyada la sameeyey, isla markaana la eego haddii uu isbeddel ku iman karo natiijooyinka ay Red Devils ka keenayso tartamada, laakiin Ed Woodward ayaa ku adkaystay in tababaraha reer Norway shaqada laga caydhinayo oo haddii waqti kale la sugo ay kooxdu gaadhi doonto heer ay tartamada oo dhan xilli horeba ka hadho.
Pochettino oo muddo shan sannadood ah oo kasoo bilaabantay 2014kii laylinayay Tottenham ayaa waxa uu kooxdan keenay finalka Champions League, waxaana muddadii uu joogay ay kooxdu dhisatay garoon cusub isagoo sidoo kalena unkay naadi adag oo ay hormood u yihiin Hugo Lloris, Toby Alderweiredl iyo Harry Kane.
Kaliya shan biloood oo ay natiijooyin xun keenaysay Spurs oo xili ciyaareedkii ka horreeyeyna finalka Champions League tagtay, waxay kooxdu shaqada ka caydhisay Pochettino iyadoo ku beddeshay Jose Mourinho, waxaanu tababaraha reer Portugal kasoo qaaday kaalinta 14aad oo ay ku jirtay markii uu qabsaday waxaanu keenay kaalinta lixaad oo ay ku dhamaysatay xili ciyaareedkii tegay.
Si kastaba, Mauricio Pochettino ayaa kalsooni ka haysta koox walba oo uu tago, waxaana la isla qirsan yahay inuu yahay macallin ku wanaagsan habaynta ciyaartoyda, barbaarinta da’yarta iyo inuu sameeyo koox deggan oo khilaaf la’aan ah.